Fikarohana momba ny firaisana Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny Reincarnation, nataon'i Walter Semkiw, MD - Fikarohana Reincarnation
Fiandohan'ny fanahy & tanjon'ny fanambadiana amin'ny vatana vaovao, nataon'i Walter Semkiw, MD
Reincarnation, Karma, Soul Mates, Twin Flames, Twin Souls, Parallel lives, Soul Evolution & Level of the Spirit Realm
Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana, izay fiaraha-miasa. Ireo mpandray anjara dia ahitana Echo Bodine, Judy Goodman, Wayne Peterson, Kevin Ryerson ary Michael Tamura. Cover art of Fiandohan'ny fanahy is by Peter Teekamp.
Fifanakalozan-kevitra izay nasehon'i Walter Semkiw, MD niaraka tamin'ny zavakanto fanahy notontosaina tamin'ny alalan'ilay fampahalalam-baovao tranainy malaza Kevin Ryerson. Ankoatra izany, ny fikarohana momba ny firazanana tsy miankina amin'ny fanjakana, anisan'izany ireo avy amin'ny fikarohana momba ny fiainan'i Ian Stevenson, MD avy amin'ny University of Virginia, dia nampiasaina mba hahatonga ny fahatakarana tsara momba ny fomba fiasan'ny vatana.
Ny fizarana dia ahitana ny toetry ny fanahy, ny toetra maha-olona, ​​ny fanahy, ny karma, ny ambaratonga ara-panahy, ny dingana amin'ny fivoaran'ny fanahy, ny fiainan'i Jesosy ary ny famaranana ny vatana vaovao indray. Ny fitomboan'ny fisoronana, dia fantatra ihany koa fa ny endriky ny fanahy jadona, ny lelam-borona ary ny fiainam-paritra dia rakotra ihany koa.
Ny herin'ny faminaniana: ny fikarohana an'i Larry Dossey, MD & Dean Radin, PhD
The Fiandohan'ny fanahy misy ampahany amin'ny premonitions, izay nentanin'ny aingam-panahy avy amin'ny Dr. Dr. Larry Dossey's book provocation, Ny herin'ny teny fanombohana. Ireo fanandramana mampiseho ny fanolorana nataon'i Dean Radin, PhD, ao amin'ny Institute of Noetic Sciences, dia averina jerena sy hazavaina.
Ny haavon'ny feon'ny fanahy; Ny lanitra sy ny helo
In Fiandohan'ny fanahy, Echo Bodine sy Judy Goodman, izay afaka niditra tamin'ny tontolon'ny fanahy, dia nanambara ny zava-niainany momba ireo sehatra samihafa ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Ireo fiaramanidina amin'ny tontolo ara-panahy koa dia voafaritra ao amin'ny pejy:
Fifandraisana sy haavo eo amin'ny tontolon'ny fanahy
dia azo alaina manerana izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny Amazon.com.
Any Etazonia dia alefaso any: Fiandohan'ny fanahy